Pull Away | Radio Veritas Asia
အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေကို လူမှုရေးအချိန်းအချက်တွေ date ပေါ့။
အကြိ်မ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ ပြီးမှ ဘာကြောင့်ထွက်ခွာ ကွဲကွာသွားသလဲ။
ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကို ဘယ်လိုရပ်တန့်သွားအောင် လုပ်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပါ။
ဒီအကြောင်းအရာတွေက ဒီနေ့ခေတ် ၂၁ ရာစု လူမှုရေးအသိုင်းအဝန်းမှာ သမရိုးကျလို ဖြစ်နေပါပြီ။
၂၁ ရာစုမှာ ကမာနဲ့ အဝှမ်း centuary of dating လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အမျိုးသားတွေကလည်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို Date လုပ်နိုင်ဖို့ရှာဖွေကြတယ်။
အမျိုးသမီးတော်တော်များများကလည်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ အချစ်စစ် အချစ်မှန်ကို ရှာတာလား?
သူတို့စိတ်ကို သူ့တို့ မယုံကြည်တဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။
ကိုယ်ရဲ့အတွင်းစိတ်က ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာ မသိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ဒီလို ဆောင်ရွက် တတ်တဲ့ တချို့သော အမျိုးသားတွေရဲ့ သားကောင် ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားပဲ အလွယ်တကူ အမိုက်မှောင်ထဲကို ဆင်းသက်ခဲ့ရင် သူ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာ အချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ ချစ်တတ်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဖို့ ခဲယဉ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေက ဒီနေ့ခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမှန်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ Most common thing ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ခုနက တင်ပြတဲ့ စိတ်ခံစားမှုမျိုးရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်ထောင်မရှိတဲ့ လူလွတ်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားတွေက ကစားကွက်တစ်ခုလို့ သဘောထားပြီး Dating လုပ်ကြတယ်။
ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာကိုအပါအဝင် မိမိကိုယ်မိမိချစ်ဖို့ ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့ တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ? ဘယ်လိုအမျိုးသားမျိုးကို ချစ်သူအဖြစ်ထား မှာလဲ? ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် သိရမယ်။ ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေလို့မရပါဘူး။ ချစ်သူမရှိသေးလည်း ကိုယ်ဖာသာ ပျော်အောင်နေတတ်ရမယ်။ ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်က ဒီလိုပြုမူနေရင် အမျိုးသားတွေက ကိုယ့်ကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် ချဉ်းကပ်ဖို့ ခဲယဉ်းသွားမယ်။ ကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်မှသာ အင်တိုက်အားတိုက် ချဉ်းကပ် တော့မှာဖြစ်တယ်။ ကစားကွင်းတစ်ခုလို ပြုလိုုတဲ့ အပြုအမူတွေ လုပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တချို့သော အမျိုးသားတွေက သူတွဲနေတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ Dating တွေ အကြိမ်များစွာလုပ်တယ်။ အမျိုးသမီးကလည်း သူရည်ရွယ်ထားတဲ့ သူ့ခင်ပွန်းလောင်းအဖြစ် သူ့စိတ်ခံစားချက်က ရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအမျိုးသားက သူဟာ Relationship ဖြစ်ဖို့ သူစိတ်ခံစားချက်က အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ သူ့ အမူအရာတွေ၊ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကနေ ပြလာတယ်။ အမျိုးသမီးအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ထာဝရလက်တွဲဖော် အဖြစ် ခံယူထားခဲ့ပေမယ့် အလဟဿဖြစ်သွားပါမယ်။ ဒီနေ့ တချို့သော အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေ ကို စိန်ခေါ်တတ်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုစိန်ခေါ်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကို တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။
ဒါကြောင့် အမျိုသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက် ခံစားချက်တွေကို လေးလေးနက် နက် တွေးပြီး အခုအမျိုးသားကို သူငယ်ချင်းအဖြစ် ဆက်သွားဖို့ ခံယူနိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် သူပြောင်းလဲလာမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အခွင့်အရေး ပေးသလိုဖြစ်စေပြီး ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်လည်း အကောင်အထည်ပေါ်လာနိုင်တယ့် မဟုတ်ပါလား။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို Focus တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ အရမ်းမထားဖို့တော့ လိုပါသေးတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး စတွေ့စမှာပဲရှိသေးတယ် အကျွမ်းတဝင် ရင်းရင်းနှီးနှီးသိပ်မဖြစ်သေးခင်မှာပဲ အမျိုးသမီးကို အလွန်အကျွံ အရေးပေးလွန်းတယ်ဆိုရင် သတိထားရ တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုအမျိုးသမီးတွေကတော့ ခေတ်စကားနဲ့ ပြောရရင် အရမ်းကြွေ အရမ်းခိုက်သွား တာပေါ့နော်။ အမျိုးသမီးအနေနဲ့ အချိန်ယူပြီး ရှေ့ဆက် ဒီအမျိုးသားက ဘယ်လိုပြုမူအုံး မှာလဲ ဆိုတာကို စောင့်ကြည်သင့့်ပါတယ်။
နောက်မှ Hopeless romantic ဖြစ်ပြီး တအံတသြ ဖြစ်သွားတတ်စေလို့ပါ။
တချို့အမျိုးသားတွေက ဘယ်လိုပဲ Dating တွေရှိခဲ့ပေမယ့် relationship တော့ဖြင့် မလုပ်နိုင်ဘူး လို့ ပြောလာခဲ့ရင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီစကားစုကို အလေးအနက်ထား နားလည်ပေးပြီး ကိုယ် ကိုကိုယ် Challenge yourself လုပ်ရမယ် သူက မတွန်းထုတ်ခင်မှာ ကိုယ်ကနားလည်ပြီး တွန်းထုတ်ပြစ်ရ မယ်။ အမျိုးသားတစ်ယောက်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို relationship အဖြစ် လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ သူတို့က တန်ဖိုးမြင့်တဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ တန်ဖိုးနိမ့်တယ့် အမျိုးသမီးဆိုပြီး သူတို့က ခွဲခြားသိနေလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် relationship ကို လက်မခံနိုင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချတာဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ သူတို့ ဘဝတစ်သက်တာ လက်တွဲဖော်အတွက် သူတို့က အလေးအနက်ထား စဉ်းစားမှာပဲ ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားရှိတယ် Man are the natural born hunters, who enjoy the choase ပရိသတ်ကြီးလည်း နားလည်မှာပါနော်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို ပြည့်ပြည့် ဝဝ အကြီးအကျယ်လည်း နားလည်ထားနို်င်ရမယ်။ မိမိကိုယ်မိမိ အပြည့်အဝချစ်နိုင်ရမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘဝတစ်သက်တာအတွက် Healthiest form of love ပြည့်ဝဖြောင့်ဖြူးသာယာတဲ့ အသွင်ကိုဆောင်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူနဲ့ ကွေကွင်း ခြင်းတွေရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာကို တင်ပြရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။